Puntland oo taageero ka rabta ciidamada Midowga Afrika ee Amisom – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo taageero ka rabta ciidamada Midowga Afrika ee Amisom
A warsame 6 March 2014 4 April 2019
Garowe – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa sheegay in maamulkiisu ka doonayo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iney ka caawiyaan sidii ay u sugi lahaayeen amaanka xuduudaha Puntland la wadaagto gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Gaas ayaa xusay in Al-Shabaab ay gabaad ka raadsan doonaan Buuralayda Galgala oo sanadihii u dambeeyay kusoo xoogeysanayeen, haddii laga riixo gobollada dhowrka ah ee ay ka maamulaan koonfurta Soomaaliya.
“Howlgalkaan wax iskaashi ah nagama dhexeeyo, waxaan leenahay hal cadow, oo ah Al-Shabaab, waa in nalaga tashto,’’ ayuu yiri C/weli Gaas oo u warramay Reuters.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas ayaa sidoo kale sheegay inaan maamulkiisa la siinin wax taageero milateri oo lagu dhisaayo ciidamada amaanka.
Alshabaab oo xarrun ciidan ku leh buuraleyda Galgala ee gobolka Bari ayaa waxaa hadda koonfurta Soomaaaliya uga wajahan dagaal dhowr dhinac ah oo ay ka qeybqaadanayaan ciidamada Midowga Afrika ee gacanta siiya ciidamada Soomaaliya.
Puntland ayaa sida madaxweyne Gaas sheegay ka cabsi qabta in Alshabaab isugu tagaan burraleyda Galgala, halkaasoo ah meel ay adagtay in laga saaro.
somalia:New Initiative Enables Somali Farmers to Produce Food Assistance
Muungaab: Ma jiro qof waajibkiisa gudanaya oo laga ceyrinayo shaqada Dowladda Hoose